Imbali kunye neNkcubeko 60s
Umlingo Owafundisa Ihlabathi Ngezinto Ezibuhlungu Zobunxuwa-mthetho
Emva kokufunyanwa kunye nokuthunyelwa eArgentina, inkokheli yamaNazi uAdolf Eichmann, eyaziwa ngokuba yiplani yeSigqibo Sokugqibela, yafakwa enkundleni kwaSirayeli ngo-1961. U-Eichmann watholakala enecala waza wagwetywa. Phakathi kobusuku phakathi koMeyi 31 noJuni 1, 1962, u-Eichmann wabulawa ngokuxhoma.
Ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi II, uAdolf Eichmann, njengabaholi abaninzi beNazi, bazame ukubalekela iJamani.
Emva kokufihla kwiindawo ezahlukeneyo eYurophu naseMiddle East , ekugqibeleni u-Eichmann wakwazi ukubalekela eArgentina, apho wahlala khona iminyaka kunye nentsapho yakhe phantsi kwegama elithiwa igama.
Kwiminyaka emva kweMfazwe Yehlabathi II, u-Eichmann, ogama lakhe liye lafika ngamaxesha amaninzi kwiimvavanyo zaseNuremberg, bebeyinto yezona zifunwa yiziNkohlakalo zaseNazi . Ngelishwa, iminyaka emininzi, akukho mntu wayazi apho ihlabathi e-Eichmann lifihle khona. Emva koko, ngo-1957, iMossad (inkonzo yenkonzo eyimfihlo yase-Israel) yafumana i-tip: U-Eichmann unokuhlala eBuenos Aires , eArgentina.
Emva kweminyaka emininzi yokukhangela, uMossad wathola enye inqaku: U-Eichmann wayehlala phantsi kwegama likaRicardo Klement. Ngeli xesha, iqela lemicimbi ye-Mossad eyimfihlo yathunyelwa e-Argentina ukufumana u-Eichmann. Ngomhla ka-21 Matshi, 1960, ii-agents azizange zifumane uKlement kuphela, zaziqinisekileyo ukuba ngu-Eichmann ababezingela iminyaka.
Ngomhla we-11 kuMeyi, 1960, i-agent ye-Mossad yathatha u-Eichmann ngelixa ehamba esuka kwindawo yebhasi ukuya ekhaya. Emva koko bathatha u-Eichmann kwindawo eyimfihlo baze bakwazi ukumbethelisa ngaphandle kweArgentina iintsuku ezilishumi emva koko.
NgoMeyi 23, 1960, uNdunankulu wase-Israel uDavid Ben-Gurion wenza isimemezelo esimangalisiweyo kwi-Knesset (iphalamende kaSirayeli) ukuba uAdolf Eichmann wayebanjelwe kwaSirayeli kwaye kungekudala uza kuthethwa.
Icaleni lika-Adolf Eichmann laqala ngo-Apreli 11, 1961 eYerusalem, kwaSirayeli. U-Eichmann uhlawuliswe ngamacala alwaphulo-mthetho kubantu abangamaYuda, izilwaphulo-mthetho zolwaphulo-mthetho, ubundlobongela obundlobongeni, kunye nobulungu kwimibutho enenzondelelo.
Ngokukodwa, iintlawulo ezityholwa ngu-Eichmann zijongene nokugqilazwa, indlala, intshutshiso, ukuthutha nokubulala izigidi zamaYuda kwakunye nokuxoshwa kwamakhulu amawaka ePolesi naseGypsies .
Ulingo lwaluza kubakho ukubonakaliswa kwezinto ezixakekayo zokuQothulwa kweNtsha . Cindezela ukususela kwihlabathi lonke landela iinkcukacha, ezanceda ukufundisa ihlabathi malunga nento eyenzeka ngokwenene phantsi kweReich Third.
Njengoko u-Eichmann wayehleli emva kwesikheji seglasi esikhankanywe ngokukodwa, amangqina angama-112 athetha ibali labo, kwingcaciso ethile, yeengxaki eziye zazifumana. Oku, kunye namaxwebhu angama-1,600 okurekhodisa ukuphunyezwa kwesigqibo sokugqibela sathunyelwa malunga no-Eichmann.
Umgca we-Eichmann okhuselekileyo kukuba wayelandela nje imiyalelo kwaye nje wayedlala indima encinci kwinkqubo yokubulala.
Abagwebi abathathu beva ubungqina. Ihlabathi li lindele isigqibo sabo. Inkundla ithole u-Eichmann unetyala kuwo onke ama-15 kwaye ngoDisemba 15, 1961 ugweba u-Eichmann ukuba afe.
U-Eichmann wabhenela isigwebo kwisigqeba esiphezulu se-Israel kodwa ngoMeyi 29, 1962 isibheno sakhe sachithwa.
Ekubhite phakathi kobusuku phakathi kukaMeyi 31 noJuni 1, 1962, u-Eichmann wabulawa ngokuxhoma. Umzimba wakhe wabuya waqothulwa kunye nomlotha wakhe wasasazeka elwandle.
Umqambi wamaNazi u-Albert Speer
Ukubulawa kukaMongameli uJohn F. Kennedy
I-US yayithumela nini iinqwelo zokuqala ukuya eVietnam?
Ukubulawa kukaMalcolm X
I-Biographer of Serial Killer uCharles Manson
Izinto ezili-6 ongazange wazi ngeSetame Street
Funda i-Japanese Word Suki
Indlela yokudibanisa "Creer" (ukudala)
IQuran malunga nobuhlanga
Igama legama Jane
Ngaba iIyunivesithi Zomntu Ziyinyaniso Eyona Ngcono KunamaKholeji Abucala?
Amaxesha amakhulu kwiMbali yokuBhukuda yaseOlimpiki
Amanqwanqwa ekunqobeni amaFobias e-Aquatic - Hydrophobia
Isingeniso kwiParchasing Power Parity
Uluhlu oluHlonisayo lweziNcwadi kuVB.NET
Indlela yokuCwangcisa iSithethe
Iyintoni idilesi ye-Agusta yeSizwe yeGalofu yeSizwe?
Imibuzo yokuSebenza ne-Demand yokuSebenza
Ilizwi elisebenzayo (igrama)
Yonke into yokwakha iHlb-Timbered
I-Panama yabafundi baseSpain
I-Fairleigh Dickinson, i-Metropolitan Admissions